Elihu kae sɛ sɛnea Onyankopɔn yɛ kɛse no, yɛrentumi nhwehwɛ mu (1-33)
Wɔn a wɔyɛ osetie no, esi wɔn yiye; ɔpo abɔnefo (11-13)
‘Ɔkyerɛkyerɛfo bɛn na ɔte sɛ Onyankopɔn?’ (22)
Ɛsɛ sɛ Hiob kamfo Onyankopɔn (24)
“Sɛnea Onyankopɔn yɛ kɛse no, ɛboro yɛn ntease so” (26)
Onyankopɔn wɔ osu a ɛtɔ ne anyinam so tumi (27-33)
36 Elihu toaa so sɛ: 2 “Nya abotare kakra ma me, na menkyerɛkyerɛ mu,Efisɛ meda so wɔ nsɛm bi a ɛsɛ sɛ meka ma Onyankopɔn. 3 Nea minim no, mɛka ne nyinaa,Na mɛka sɛ me Bɔfo no di bem.+ 4 Ampa, atoro biara nni asɛm a mereka no mu;Nea Ne nimdeɛ wie pɛyɛ no+ na ogyina w’anim yi. 5 Nokwasɛm ni, Onyankopɔn yɛ otumfo,+ na ɔmpo onipa biara;Ne ntease* mu dɔ. 6 Ɔremmɔ abɔnefo nkwa ho ban,+Na mmɔborɔwafo de, ɔbɛma wɔanya atɛntrenee.+ 7 N’ani wɔ atreneefo so daa;+Ɔde wɔn si ahengua so te sɛ ahemfo,*+ na ɔhyɛ wɔn anuonyam daa. 8 Nanso sɛ wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn gu wɔn,Na amanehunu nhama kyere wɔn a, 9 Ɔma wohu nea wɔayɛ,Na ɔma wohu mmarato a wɔn ahomaso akɔfa aba. 10 Obue wɔn aso ma nteɛso,Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔntwe wɔn ho mfi bɔne ho.+ 11 Sɛ wotie na wɔsom no a,Wɔn nna a aka no, wobedi yiye,Na mfe a wobedi nyinaa, wɔn ani begye.+ 12 Na sɛ wɔantie a, ɛnde wɔde sekan* bekunkum wɔn,+Na wobewu a wonni nimdeɛ. 13 Wɔn a bɔne adidi wɔn komam no,* wɔn na wɔde abufuw hyɛ wɔn mu. Sɛ ɔkyekyere wɔn mpo a, wonsu nhwehwɛ mmoa. 14 Wowuwu* bere a wonnyinii,+Na wɔne tuutuufo mmarima a wɔwɔ asɔrefi na edi hwebom.*+ 15 Nanso Onyankopɔn gye* mmɔborɔwafo fi wɔn amanehunu mu;Sɛ nkurɔfo teetee wɔn a, Obue wɔn aso. 16 Ɔtwe wo fi amanehunu ho,+Na ɔde wo ba baabi a ɛhɔ trɛw a ɛhɔ nkyere,+Na ɔde nnuan pa gu wo pon so de kyekye wo werɛ.+ 17 Na atemmu a ɛbɛba abɔnefo so no bɛma wo koma atɔ wo yam,+Bere a wɔabu atɛn na atɛntrenee ayɛ adwuma no. 18 Nanso hwɛ yiye na abufuw amma woannya obi ho tan,*+Na mma adanmude* kɛse nnnaadaa wo. 19 Wugye di sɛ wo sufrɛAnaa wo mmɔdenbɔ bebrebe no bi betumi ayi wo afi amanehunu mu?+ 20 Nka sɛ wunyae a anka anadwo aba,Anadwo a nnipa yera fi baabi a wɔwɔ no. 21 Hwɛ yiye na woankɔyɛ bɔne;Fa amanehunu mmom, na nkɔyɛ bɔne.+ 22 Hwɛ! Onyankopɔn nam ne tumi so nya anuonyam;Ɔkyerɛkyerɛfo bɛn na ɔte sɛ ɔno? 23 Hena na wakyerɛ No kwan*+Na hena na waka akyerɛ No sɛ, ‘Nea woayɛ yi de, enye’?+ 24 Kae na kamfo ne nnwuma+A nnipa ato ho dwom no.+ 25 Nnipa nyinaa ahu;Onipa dasani gyina akyirikyiri hwɛ. 26 Ampa! Sɛnea Onyankopɔn yɛ kɛse no, ɛboro yɛn ntease so;+Mfe a wadi nso, yɛrentumi mfa yɛn adwene mmu.*+ 27 Ɔtwe nsu a ɛsosɔ kɔ soro;+Ɔma ɛdan ɛbɔ,* na ɛdan bɛyɛ osu a ɛtɔ; 28 Afei omununkum hwie osu no gu fam;+Na ɛtɔ gu nnipa so. 29 Wohwɛ a, obi betumi ate sɛnea omununkum ahyehyɛ no ase?Aprannaa a ɛbobom wɔ Ne ntamadan* mu no, obi betumi ate ase anaa?+ 30 Hwɛ sɛnea ɔtrɛw n’anyinam*+ mu wɔ so,Na hwɛ sɛnea wakata ɛpo bun* so. 31 Eyinom na ɔde hwɛ* nnipa;Ɔma aduan bu so ma wɔn.+ 32 Ɔde ne nsa kata anyinam so,*Na ɔkyerɛ no kwan kɔ baabi a ɛsɛ sɛ ɛkɔ.+ 33 N’aprannaa ka ne ho asɛm,Na nyɛmmoa mpo ma yehu nea ɔreba.*
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Ɔde ahemfo si agua so.”
^ Anaa “Wɔn kra wu.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Wɔne tuutuufo mmarima a wɔwɔ asɔrefi no nkwa ba awiei bom.”
^ Nt., “Ogye.”
^ Anaa “woammɔ wo nsam amfa ammu obi animtiaa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Hena na waka n’anim wɔ n’akwan ho; Hena na wabu no atɛn wɔ n’akwan ho.”
^ Anaa “yɛrentumi nhwehwɛ mu.”
^ Anaa “Onyankopɔn bɔ.”
^ Nt., “N’apata.”
^ Nt., “ne hann.”
^ Nt., “ntini.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɔde di ma.”
^ Anaa “Ɔde ne nsa so anyinam mu.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ade a ɛreba.”